गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क कसरी गर्ने ? – Health Post Nepal
गर्भावस्थामा यौन सम्पर्क कसरी गर्ने ?
२०७८ जेठ २७ गते ११:२९
महिला गर्भवती हुँदा धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। एक सानो गल्तीले पनि गर्भपात हुने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले धेरै जोडीहरु गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध बनाउन डराउँछन्।
अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने अधिकांश जोडीहरु गर्भ बसेको तीन महिनापछि सम्बन्ध बनाउँदैनन्।
तर, मेडिकल साइन्सले भने यसलाई अस्वीकार गर्छ। चिकित्सकहरुले गर्भावस्थाका दौरानपनि सुरक्षित तरिकाले यौन सम्बन्ध बनाउन मिल्ने बताएका छन्।
गर्भावस्थामा महिलामा शारीरिक र हार्मोनमा थुप्रै परिवर्तनहरु हुने गर्छन्। यस अवस्थामा महिलामा सेक्सको चाहना बढी हुन्छ। चिकित्सकले यस अवस्थामा हुने यौन सम्पर्कले शारीरिक आनन्दमात्र नदिएर भावनात्मक रुपमा पनि एकअर्कालाई नजिक राख्ने बताउँछन्।
–महिला गर्भवती भएको बेलमा पुरुष र महिला एकै दिशामा फर्केर यौन सम्पर्क गर्यो भने पेटमा भएको बच्चालाई कुनै दबाब नभई यौन सम्पर्क गनै सकिन्छ। र यस आसनबाट पुर्ण रुपमा सन्तुष्टि प्राप्त हुने कुरा विज्ञहरुको छ । र पेटको बच्चालाई असुविधा नहुने गरी पछाडीबाट अंगालो हालेर पुरुषले स्त्रीसँग सहवास गर्न सक्छ ।